I-iPhone 12 vs Mini vs Pro ne-Pro Max - amamodeli ama-4 aqhathaniswa - Amagajethi
Akukho okubonakala kumisa i-Apple uma kukhulunywa ngokwethula izingcingo zayo. Yize ubhadane lwehlise ijubane usuku lokukhishwa, i-iPhone 12 entsha ekugcineni ifikile. Okwamanje, i-Apple ithatha ukuguquguquka kwamamodeli kuya kwelinye izinga. Esikhundleni samamodeli amabili noma amathathu wokukhetha, uthola amamodeli amane ongakhetha phakathi kwawo.
Ebusweni, ziyafana nomehluko wosayizi ophawulekayo. Kepha yini ebenza bahluke ngokweqiniso? Yikuphi okufanele ucabangele? Uma ufuna ukuthola izimpendulo zale mibuzo bese ukhetha kahle, funda futhi.
Lo mbhalo uzothola ukuhlaziywa okufanele kwama-Apple iPhone 12 Models ngokuqhathanisa okufanele. Ayicabangi intengo yamanani kepha umehluko ophawulekayo wangempela kumamodeli amane. Ake siqale ngethebula lokuqhathanisa:
Ithebula Lokuqhathanisa Amamodeli we-iPhone 12:
Usayizi Wokubonisa 6.1 Inch 5.4 Inch 6.1 Inch 6.7 Inch
Isixazululo 2532 x 1170 2340 x 1080 2532 x 1170 2778 x 1284
Ubuningi bePixel 460 PPI 476 PPI 460 PPI 458 PPI
Impilo yebhethri 15 Amahora 15 Amahora 17 Amahora 17 Amahora
Inketho Yokugcina 64/128/256 GB 64/128/256 GB 128/256/512 GB 128/256/512 GB
Ikhamera engemuva Okubili (Okubanzi nobubanzi be-Ultra) Okubili (Okubanzi nobubanzi be-Ultra) Kathathu (Okubanzi, Okubanzi nge-Ultra & Telephoto) Kathathu (Okubanzi, Okubanzi nge-Ultra & Telephoto)
Ikhwalithi engemuva yekhamera I-12 Megapixel (Kokubili) I-12 Megapixel (Kokubili) I-12 Megapixel (Bontathu) I-12 Megapixel (Bontathu)
Ikhamera engaphambili Ongashadile (12 MP) Ongashadile (12 MP) Ongashadile (12 MP) Ongashadile (12 MP)
Isisindo 164g (5.78 Oz) I-135g (4.76 Oz) I-189g (6.66 Oz) 228g (8.03 Oz)
I-Apple ilethe i-A14 Bionic chip yakamuva ethembisa ukusebenza okuphezulu kwamafoni. Ukuboniswa kwe-OLED kwe-Edge-to-edge kuvelele kuwo wonke amamodeli amane. Ngokwengeziwe, uthola isihlangu se-ceramic sesibonisi esithi simelana kanokuphindwe kane kunamamodeli wangaphambilini we-Apple iPhone (11 noma ngaphezulu). Zonke lezi amamodeli faka i-XDR Super Retina Display yokusebenza ezisezingeni lomhlaba.
Ngakho-ke, ifoni ngayinye ikulethela inkontileka ephawulekayo nencazelo yombala engcono. Ubuningi be-pixel buyancomeka ngesinqumo esiphezulu sokucacela kahle. Yonke imodeli ihlanganisa imodi yasebusuku yamakhamera aletha ukukhanya okungu-27% ngaphezulu kokucaca kwesibhamu. Nge-chipset entsha, ithi inikela ngekhwalithi yeDolby Vision yokurekhoda.
Izinombolo zezinombolo ze-iPhone 12 (A2172, A2404)
Amamodeli we-iPhone 12 - Izici Ngesikhathi Ucabanga
Kukhona ukuqeda okuqhakazile okuyisihlanu imodeli ngayinye etholakala ku. Kukhona isiginesha ebomvu, emnyama, emhlophe, eluhlaza naluhlaza okwesibhakabhaka etholakalayo kumamodeli.
1. IP68 Ukumelana
Ama-Apple iPhones amasha eza nomthamo omangalisayo wokuvimbela ukungena kwamanzi. Kodwa-ke, i-Apple ikucela ukuthi ungayivezi njalo emanzini, ngaphandle kokumelana kuze kufike kumamitha amane emanzini imizuzu engama-30. Ngakho-ke, izokunikeza ukuvikeleka okufanele emvuleni, emanzini, nakokunye ukuvezwa okufanayo.
Ama-Apple iPhones nawo athola i-tweak ephawulekayo ekumelaneni nothuli nezinhlayiya. Uthola umkhiqizo ohlala isikhathi eside ngokuqinisekiswa kwekhwalithi efanayo ne-Apple. I-Apple ikwenza kucace ukuthi ngokuhamba kwesikhathi, ukumelana kungaphela njengoba kwenza nganoma iyiphi enye idivayisi. Kodwa-ke, i-IP6X yaziwa njengesilinganiso esiphezulu sokungena kwamanzi esitholakala kumadivayisi we-iPhone. Ngakho-ke ukwengeza okuphawulekayo.
2.I-Smart HDR 3
I-smart HDR 3 iyatholakala kuwo wonke amamodeli futhi inika abantu lula ukuthwebula izithombe ezibukhali. Iletha ikhwalithi enhle futhi isebenzisa amakhono wokufunda womshini ukuze isebenze kangcono. Ngakho-ke, ingalungisa ubukhali, imibala, ukukhanya nezinye izilungiselelo ngokuzenzakalela. Uma ufuna ukuthwebula ukuthungwa noma izithombe ezigcwale kangcono, i-Smart HDR3 entsha ngokungangabazeki iyancomeka.
Ukusebenza kwe-4K HD
Manje usungarekhoda amavidiyo ku-Dolby Vision noma uthathe izithombe. Yonke imodeli isekela i-4K HD ngokukhetha okuhleliwe phakathi kwama-fps angama-30 noma angama-60. Ungabeka phansi ikhwalithi ku-720P okungenani. Indawo ejwayelekile yedijithali icishe ibe ngu-3x. Uthola i-slow-mo, i-panorama, ukuphela kwesikhathi, ukuzinza kwevidiyo yesinema, nokunye okuningi. Ngakho-ke, iyifoni enhle kakhulu yabadali bokuqukethwe emhlabeni wonke.
4.Ikesi leMagSafe Nokushaja Okungenantambo
I-Apple izama ukwenza isesekeli esisha seMagsafe esikuvumela ukuthi usebenzise ozibuthe ku-iPhone yakho engemuva. Ungabopha iMagsafe eza ngezinhlobonhlobo zokuqeda nemibala ukulingana okuthandayo. Ikuvumela ukuthi ugcine imali noma amakhadi wesikweletu. Ngokwengeziwe, iMagsafe ivikelwe ukuvikela amakhadi wesikweletu ngaphandle kwenkinga.
Ukushaja okungenantambo isivinini esikhulu ngokulungiswa okuzenzakalelayo kwamagnet ukwengeza ukushaja. Uthola isipiliyoni sangempela semikhumbi yombani ngemodeli yakamuva ku-Apple's flagship.
Ukuqhathaniswa Kwamamodeli we-iPhone 12:
Manje njengoba sesazi nge-iPhone 12, ake sibheke ngokujulile ukuthi yini eyenza imodeli ngayinye ihluke. Ingabe ukhona umehluko wangempela phakathi kwalezi zinhlobo, noma ingabe kuyindlela yokuthengisa? Ake siqale ngokuthile i-Apple engazange ikwazise kusukela ngo-2016, i-Apple iPhone 12 Mini:
1. I-iPhone 12 Mini - INkosi Encane
Sekuyisikhathi eside i-Apple yethule i-iPhone encane. Lapha une-iPhone 12 Mini ebushelelezi enesibonisi esingu-5.7-intshi. Idizayini yayo engaphansi kwe-bezel iyefana nesibonisi esijwayelekile esingu-4.7-intshi i-Apple eyayaziwa ukuthi izoyinikeza. Ngakho-ke, uma uzizwa u-nostalgic kancane, lokhu kungaba ukukhetha okulungile.
Iphuzu le-iPhone 12 Mini ukuhlinzeka ngohlobo lwe-iPhone 12 olunesaphulelo ngokusebenza okufanayo nezinga lamandla. Ine-chipset yakamuva ye-Bionic enempilo ebanzi yebhethri nesibonisi se-OLED. Uthola ikhamera embaxambili nokusebenza okumnandi ngokuphelele.
Inesibonisi se-HDR, ithoni yangempela, umbala obanzi, ukuthinta oku-haptic kepha izinombolo ezingama-625 ngokugqama. Ngamafuphi, i-iPhone 12 Mini inakho konke okukulethela imodeli ejwayelekile ye-iPhone 12, kepha inomzimba omncane. Yilokho okunciphisa intengo.
Uma ufuna i-iPhone ehlangana kakhulu, ephathekayo futhi ezwakala njengefoni ephathekayo yangempela, i-iPhone 12 iyisinqumo esihle. Ubukhulu obuncane abuxegi ngamandla nakancane.
2. I-iPhone 12 Pro Max - The Grand Choice
Phezulu, ikhamera ye-iPhone 12 Pro Max ingabonakala ifana ne-12 Pro, kepha kunomehluko omkhulu. Ngosayizi omkhulu, uthola izinzwa ezinkulu zekhamera ukuze zisebenze kangcono, zicace futhi zibukhali. Esikhundleni se-2x Optical Zoom, uthola ukusondeza okubonakalayo okungu-2.5x, ngenxa yobude obukhulayo belensi yefoni. Kukonke, uthola ukuqiniswa kwesithombe okuthuthukile ngekhono lokusebenzisa ikhamera ekuphakameni kwamakhono.
Izinketho zesitoreji, ukuxhumana, nokusebenza konke kuyafana ngePro nePro Max. Noma kunjalo, kukhona i-tweak ephawulekayo ngosayizi. Uthola ama-intshi angu-6.7 wesibonisi esikhulu, okungesinye sohlobo. Ngakho-ke, uhlanganisa zonke izici ze-iPhone 12 bese uzikhulisa ziye kubukhulu. Ngamanye amagama, i-Apple iPhone 12 Pro Max ikhulisa impela isikhalazo sayo.
Uma ufuna ukusebenza kangcono kwekhamera nokubonisa, khona-ke i-12 Pro Max ingakufanelekela ukutshalwa kwemali. Ngaphandle kwalokho, i-12 Pro iwenza kahle kakhulu umsebenzi.
I-iPhone 12 vs iPhone 12 Pro:
Phezulu, zombili lezi zingcingo zibukeka zicishe zifane. Zombili zinezindikimba ezifanayo zokubonisa, zokuxazulula, nezombala. Kodwa-ke, i-12 Pro ngokungangabazeki inguqulo engcono enokuphila okungcono kwebhethri nokukhanya kwe-800 nits, yize bobabili bepakisha ubukhulu be-pixel efanayo.
I-iPhone 12 Pro ihlanganisa amakhamera amathathu uma iqhathaniswa namakhamera angemuva we-iPhone 12. Imodeli yePro ifaka ukusondeza okubonakalayo okungu-2x ne-LIDAR ukuze icaciselwe kangcono, kugxilwe ngokushesha, futhi kuthathwe izithombe ezingakhanyi kangcono. Ngenkathi zombili izingcingo zisekela iDolby Vision, i-iPhone 12 Pro inikeza ama-fps angama-60 ngenkathi imodeli ejwayelekile inikela ngama-fps angama-30.
Uthola insimbi engagqwali yomzimba we-iPhone 12 Pro, kuyilapho i-iPhone 12 isebenzisa ukusika okujwayelekile kwe-aluminium ukufaka isikhalazo se-premium. Kunomehluko omkhulu phakathi kwesitoreji sezinga lokungena lalaba ababili, futhi. I-iPhone 12 inesitoreji esingu-64 GB ngentengo yokuqala, kuyilapho i-iPhone 12 Pro inikela ngo-128 GB.
Ebangeni lentengo, ukuthengiselana ngezici ezingeziwe kungabonakala kukuncane kakhulu. Kungaba ngcono ukuhlose i-iPhone 12 Pro Max. Kodwa-ke, kubathandi beqiniso be-Apple iPhone, ngisho nomehluko omncane wenza umthelela omkhulu.
Isinqumo Sokugcina - Ungakhetha Kanjani?
Uma uqhathanisa imodeli entsha ye-iPhone 12 ne-iPhone 11, i-Apple ikhombise ukweqa okuphawulekayo ekusebenzeni nasekuthuthukisweni kwekhamera. Lokhu kungukugxuma okubaluleke kakhulu abakwenzile, ngokusho kwezimangalo abazenzayo. Ngakho-ke, ukwenza i-iPhone 11 ingayifanele imali, naphezu kwezaphulelo ezinkulu iyatholakala.
I-A14 Bionic Chip entsha sha ithi okungenani ishesha ngama-50% kunama-smartphones ashesha kakhulu. Impilo yayo yebhethri kufanele ibe ngamahora we-15-17 wokudlala ividiyo. Uthola ukushaja okungenantambo nokuxhaswa ngazo zonke izesekeli ze-Apple zangaphambilini njengamashaja, ama-Airpod nokunye.
Uma uqhathanisa amamodeli amane komunye nomunye, intengo ingahle ingakufanele ama-tweaks nezinguquko. Uma ungenandaba nosayizi wokubonisa, iMini ifeza umsebenzi we-iPhone ejwayelekile ye-12.Nokho, uma ufuna ukuthola okungcono kakhulu kwe-iPhone 12, imodeli yePro Max iyindlela okufanele uhambe ngayo. Kunomehluko omkhulu phakathi kwe-12 ne-12 Pro, ngaphandle kosayizi wokubonisa.
I-xbox eyodwa amakhadi abukhoma mahhala
amasayithi wokusakaza we-tv ephephile
bhalisela i-amazon prime student
kungani i-netflixflix ingasebenzi
lawula ibhokisi le-android tv ngocingo